ယောဟန်အောင်: ဇင်တရားတော်နှင့် ဘလော့စီမံရေးသား မွေ့လျော်ခြင်း အနုပညာ
ဇင်တရားတော်နှင့် ဘလော့စီမံရေးသား မွေ့လျော်ခြင်း အနုပညာ
ငါက ဘာသာပြန်တာတွေ မှားလွန်းလို့
ဘလော့ဂါ ဖြစ်တာကို ဘ၀င်မြင့်စရာမလို
အွန်လိုင်း ထီပေါက်တာလည်း ဘယ်သူမဆို ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
ဇာတ်လိုက်တယောက်ဟာ အကြိမ်ကြိမ် အရေခွံလည်းနိုင်သလို
လူကြမ်းဟာလည်း အကြိမ်ကြိမ် ထိုးခံရ လဲကျနိုင်တယ်။
မှော်ကျင်းထဲက မျောလာတဲ့ စကားလုံးတွေကို ဆယ်ယူလိုက်
ကိုယ့်ကို နားမလည်ရင်လည်း နားမလည်တဲ့အတိုင်း ထားလိုက်
ကိုယ်က နားမလည်ရင်လည်း နားမလည်တဲ့အတိုင်း ထားလိုက်။
ဒါဟာ ဂုဏ်ယူဖွယ် သမိုင်းရေးနေတာ မဟုတ်သလို
နောင်တရစရာ အတိတ်လည်း မဟုတ်ပေဘူး။
ငါ့ကိုယ်ငါ သစ်တောလို အမြဲစိမ်းထားခဲ့တယ်
ငါ့ကိုယ်ငါ သမုဒ္ဒရာကြီးလို ပြာထားပေးခဲ့တယ်။
ငါ့ကိုယ်ငါ တိမ်တွေလို လွှင့်ထားပေးခဲ့တယ်။
တယောက်ယောက်ကတော့ “နှင်းရေ” လို့ လာအော်လိမ့်မယ်။
ငါ စိတ်ကို ဖွင့်ထားခဲ့တယ်။
ငါ့ အခန်းကို ရှင်းထားခဲ့တယ်
ငါက ပျော်ရွှင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေသလို
ငါက ငိုကြွေးလိုက်ဖို့လည်း အသင့်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
၄ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၀၈
Posted by Yaw Han Aung at 9:32 PM
min chit chit said...
so good. i like your poem
အသိစိတ်ထဲမှာ လက်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်.
ကျေးဇူးဗျာ. လုံးဝ ကျေးဇူးတင်တယ်...
အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ အကိုရေ
reader မှာ ဖတ်တာ အားမရလို့ ဘလောဂ့်ထိ လာဖတ်ပြီး comment ရေးသွားတယ်နော်
ဟားဟား ကဗျာ အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ..။
ကဗျာလေး ခံစားသွားတယ် အစ်ကို။
Aung Tha Nge said...
ကျနော် လာမလည်ဖြစ်ဘူး နှစ်ရက် သုံးရက်။ ဟော... ကျနော်လည်း ပြန်လာလည်ရော မျဉ်းဖြောင့် တကြောင်း ပေါ်မှာ ကဗျာဆရာက ထိုင်လို. ...။ ကျနော့်ကို ငိုအောင်၊ ရယ်အောင် သူပဲ လုပ်နိုင်တော့တယ်။ ကျနော့် အခန်းကိုတော့ ခုထိ မရှင်းနိုင်သေးဘူး ဆရာယော။ ဒါပေမယ့် ဆရာယော အတွက်တော့ ကျနော့် ဂျီ-တော့ခ်ကို စိမ်းထားခဲ့တာပေါ့။